आफ्नै विरोधाभासहरूमा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
विगतका आफ्ना पुस्तकका केही प्रसंग पढ्दा अहिले असहज लाग्छ ! अचम्म लाग्छ ! मानौं त्यो अरू कसैले लेखेको हो, मैले होइन । मनोविश्लेषक कार्ल युंगले अटल गहिराइमा आफूभित्र रहने त्यस्ता पुरानो सत्त्वलाई (सेल्फ) स्याडो भनेका छन् । यहाँ त्यो स्याडोलाई समयको यो विन्दुबाट नियाल्ने यत्न गरिएको छ ।
भाद्र २६, २०७७ रोशन शेरचन
काठमाडौँ — आफू हिँडेको बाटोलाई कहिलेकाहीँ फर्केर हेर्नुपर्छ । एकोहोरो हिँडी मात्रै रहँदा धेरै कुरा छुट्छ । शिक्षाविद् पाओलो फ्रेरेले रोकिँदै र फर्केर हेर्ने विधिलाई स्टेपिङ ब्याक भनेका थिए । कर्म समीक्षा, कर्म समीक्षा र कर्म समीक्षाको यो चक्र (एक्सन रिफ्लेक्सन साइकल) वास्तवमै उपयोगी विधि छ । आफू हिँडेको साहित्यिक यात्रालाई कहिलेकाहीँ मैले पनि फर्केर हेर्ने गरेको छु ।
कोभिड– १९ ले आक्रान्त–समयमा त्यसो गर्न झन् सुविधा छ ।
ज्ञान आर्जन, समीक्षा र परिमार्जनको शृंखला डुंगा चलाएजस्तो हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ, हुनु हुँदैन । जोडिँदै थपिँदै जानुपर्छ । हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्ने वाक्यांश हामीले यति धेरैपटक सुन्यौँ कि, त्यो सामान्य लाग्छ । सामान्य सुनिए पनि त्यो सामान्य होइन, अन्तरदृष्टि हो भनेर म आफैंलाई सम्झाइराख्छु । विगतमा सत्य मानेका आफ्नै विचार समयक्रममा असत्य र अधुरा लाग्न सक्छन् । केन्द्रीय कुरा छुटेको तर परिधिको कुरा मात्रै समातिरहेको लाग्न सक्छ । अहिले ती लेख पुनः लेख्नुपरे, त्यसरी लेख्दिनथेँ, यसरी लेख्थेँ भन्ने मनमा विचार उठ्ने गर्छ । मेरा पनि केही त्यस्ता अनुभव छन् ।
पहिलो कवितासंग्रहलाई आधार मान्दा मेरो लेखन–यात्राले पच्चीस बर्ष नाघेछ । विगतका आफ्ना पुस्तकहरूका चारवटा प्रसंग (दर्जनौं छन् तर यहाँ चारवटा मात्र) छन्, जसलाई पढ्दा मलाई असहज लाग्छ । हाँसो उठ्छ । अचम्म लाग्छ । मानौं त्यो अरू कसैले लेखेको हो, मैले होइन । मनोविश्लेषक कार्ल युंगले अटल गहिराइमा आफूभित्र रहने त्यस्ता पुरानो सत्त्वलाई (सेल्फ) स्याडो भनेका छन् । यो छोटो लेख, त्यो स्याडोलाई समयको यो विन्दुबाट नियाल्ने यत्न हो । स्याडोसँगको संघर्षको संक्षिप्त लेखोट । यहाँ किताबको नाम, लेखको शीर्षक र पृष्ठ संख्या उल्लेख गर्दै, आफ्ना धारणा राखेको छु ।
१. कविताको समाप्ति संसारको समाप्ति हो । संसारको समाप्तिको विचार अस्वस्थ छ– यद्यपी विश्वास तर्क पर छ– तसर्थ जीवन विसंगत छ । (कविताको समाप्ति संसारको समाप्ति हो, पृष्ठ ४०, मस्तिष्कहरूको मृत्यु, २०५८)
‘मस्तिष्कहरूको मृत्यु’, मेरो पहिलो निबन्ध संगालो । प्रकाशित भएको २० वर्ष पुगेछ । ‘कविताको समाप्ति संसारको समाप्ति हो’ शीर्षकको लेख आजभोलि पढ्दा, कसरी त्यस्तो अति (एक्स्ट्रिम) लेखेछु भन्ने लाग्छ । कुन मनोविज्ञानबाट डोहोरिएर त्यस्तो लेखेँ ? विसं २०५० तिर कवितासँग अत्यन्त लगाव थियो । अभिभूतै थिएँ । कुनै वस्तु वा घटनासँग एकाकार हुँदा त्यस्तै धारणा लेखिने रहेछ । एकाकार हुँदा वस्तुगत दूरी बन्दैन र त्यो विशाल ठूलो हुँदै विश्वरूपजस्तो बन्दो हो । अहिले अलिक परबाट (उचाइबाट ?) हेर्ने कोसिस गर्दै छु । धारणा अत्यन्त मनोगत भएकाले विज्ञानसम्मत दृष्टि थोरै उघ्रँदा पनि त्यस्ता धारणा गर्ल्यामगुर्लुम्म भत्कँदो रहेछ । इतिहास साक्षी छ, अतिशय भावुकताको परिणति त्यस्तै हुन्छ । कवितालाई नै संसारको दर्जामा राखेर बराबरी मान्नु कदाचित परिपक्व विचार थिएन । फर्केर हेर्दा, अतीव लगावको कारण अनुपातमा हेर्ने (सेन्स अफ प्रोपर्सन) क्षमता गुमेको रहेछ ।
मेरो ‘कविताको समाप्ति, संसारको समाप्ति हो’ मा निहित कमजोरी देख्न विश्वव्यापी कोरोना महामारीले थप सघाएको छ । कोभिड–१९ ले विश्वलाई थिलोथिलो बनाएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप धराशायी बनाउँदै त्राहिमाम् मच्चाइरहेको छ । लाखौंको ज्यान लिँदै, समुदायमा प्रवेश गरेर प्रत्येक मान्छेको जीवनको लय नै भत्काइदिँदा त संसारको समाप्ति भएको छैन । केही हजार कविले आस्था राख्ने कविता समाप्त हुँदा, सात अर्बभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्ने संसार समाप्त भएको कसरी मान्ने ? त्यो अनुपातमा हेर्ने क्षमता गुमाउँदा निकालेको निष्कर्ष लाग्छ अहिले फर्किहेर्दा ।
मान्छेको आशावादिता सजिलै कहाँ निभेको छ र अब निभ्नलाई ? मान्छे विश्वयुद्ध, अनिकाल, महाभूकम्प र कारोनाजस्ता हरेक विपत्मा आशावादितालाई जोगाउँदै पर्खिबस्छ । ऊ सुदूर भविष्यतिर हेर्दै पर्खन्छ तर रोकिँदैन । यस्तोमा कविताको समाप्तिलाई संसारकै समाप्ति मान्नु एक कविताप्रेमीको भावुक अभिव्यक्तिभन्दा बढी केही होइन । संसार छ र त कविताको महत्त्व छ । फर्केर हेर्दा, त्यो बेअर्थको विचार भेट्छु ।
२. जीवनका पाठशालाहरूका गुरुहरू अनुभवहरू, भोगाइहरू हुन् भने पाठ्यक्रमका पाठशालाहरूका गुरु, ज्ञान र विचारहरू हुन् । ज्ञान र विचारका अनुभवहरूका सापेक्षमा जहिलेसुकै सेकेन्ड ह्यान्ड हुन्छन् । सेकेन्ड ह्यान्ड कुरालाई लिएर लामो समयसम्म लड्न सकिन्न । (जीवनका पाठशालाहरू, पृष्ठ ५९, मस्तिष्कहरूको मृत्यु) ।
‘मस्तिष्कहरूको मृत्यु’ निबन्धसंग्रहमै जीवनका पाठशालाहरू निबन्धमा यस्तो लेखेको थिएँ । अन्य स्रोतबाट प्राप्त ज्ञान र आफ्नै अनुभवबाट प्राप्त ज्ञानको तुलना गर्ने क्रममा अनुभवप्रदत्त ज्ञानलाई श्रेष्ठ र त्यसैले भरपर्दो भनेको रहेछु । अनुभवमा आफैं संलग्न हुने भएकाले त्यो फस्ट ह््यान्ड हुन्छ र त्यसैले भरपर्दो भन्ने निष्कर्ष निकालेको रहेछु । अन्य ज्ञानहरू सेकेन्ड ह्यान्ड भएकाले भर पर्न सकिन्न भनेको रहेछु ।...लामो समयसम्म लड्न सकिन्न भन्नाले जीवनलाई युद्ध नै मानेको रहेछु ।
पुस्तकबाट प्राप्त ज्ञान भर पर्नयोग्य छैन, कारण त्यो आफ्नो अनुभव होइन, साह्रै मनोगत तर्क लाग्छ अहिले । भरपूर सतही । अनुभवबाट प्राप्त ज्ञान मात्र भरपर्दो हुन्छ भन्ने मान्दा, मान्छेको ज्ञानको सीमा धेरै खुम्चन्छ, कारण मान्छेको अनुभवको सीमा छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक यथार्थले (मटेरियल कन्डिसन) प्रभावित गर्ने भएकाले मान्छेले खासखाले अनुभव मात्र गर्न सक्छ । सबै अनुभव गर्न सम्भव हुँदैन । मध्यमवर्गीय ठिटोले उच्चवर्गको अनुभव गर्न सक्दैन ? गैरदलितले दलितको । पुरुषले महिलाको । अध्ययनको हकमा त्यस्तो सीमा हुँदैन । गैरदलित युवाले दलितको अनुभव पढेर समानुभूति राख्न सक्छ । नेपालको पाठक अफगानी लेखकसँग उनको काल्पनिक यात्रामा निस्कन सक्छ । थरीथरीका लेखकको, विभिन्न कालखण्डमा लेखिएका विविध विषयको पुस्तक पढेर जानकारी, ज्ञान र अन्तरदृष्टि पाउन सकिन्छ । मान्छेको छोटो जीवनमा ज्ञान लिने पुस्तकभन्दा सजिलो माध्यम सायदै अर्को छ । बित्थामै फस्ट ह्यान्ड र सेकेन्ड ह्यान्डको रस्साकस्सीमा अल्झेछु ।
महत्त्वपूर्ण कुरो बरु कति अलोचनात्मक चेत वा वस्तुगत भएर पढ्न सकेँ, त्यो पो रहेछ । यी हरफलाई अहिले लेख्न परे, यसरी लेख्नेछु— अनुभवभन्दा बुद्धि (तर्कपद्धति) सधैँ उच्च छ । अनुभवबाट आउने ज्ञानलाई पनि तर्कको कसीमा नघोटेसम्म त्यसमा भर पर्नु हुँदैन । इतिहास पढ्दा बुझ्छौं, तर्क पद्धतिले सधैं जितेको छ ।
३. ...मैले दोस्रो प्रश्न गरेँ, आर्थिक दृष्टिले चीनले विकास त धेरै गर्‍यो तर गरिब र धनीबीचको खाडल पनि बढ्दै गएको छ नि ? नेपालमै अत्यन्त सोधिने तर चित्तबुझ्दो जवाफ नभेटिएकाले म उक्त प्रश्नको जवाफ अनुभव भोगेका चिनियाँबाट सुन्न चाहन्थेँ । जवाफमा उनले भनिन्, ‘गरिब र धनीबीचको खाडल त बढ्दो छ । तर, अहिलेका गरिब उहिलेका गरिबभन्दा धनी छन् (वेटर अफ, उनले प्रयोग गरेको शब्द)...। (देङ सियाओपिङ्को आत्मा, अन्नपूर्ण पोस्ट, १६ पुस, २०७३) ।
चीनको आर्थिक प्रगतिबारे बुझ्न नचाहने कमै होलान् । आर्थिक प्रगतिले निम्त्याउने गरिब र धनीवीचको खाडल (इनकम इनइक्वालिटी) पनि उत्तिकै चासोको विषय हो । एक अध्ययनअनुसार, सन् २०१९ मा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब १४.१ ट्रिलियन हाराहारी छ । चीनको विगतको ३१ वर्षको (१९७९–२०१०) कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नै वार्षिक ९.९ प्रतिशत छ, जुन आश्चर्यजनक आँकडा हो । सन् २०७३ मा बेइजिङ भ्रमणमा मैले एक जना चिनियाँलाई यसै सेरोफेरोमा प्रश्न गरेको थिएँ । देङ सियाओपिङ्को नीतिकै कारण धेरै चिनियाँ गरिबीबाट मुक्त भएको र विगतका गरिबभन्दा अहिलेको गरिब राम्रो (वेटर अफ) रहेको भन्दै उनले देङको प्रशंसा गरेका थिए ।
सन् ८० को दशकबाट सुरु भएको चीनको आय–असमानता विश्वकै अग्रपङ्क्तिमा पर्छ । सन् २०१३ मा, चीनको जिनी कोफिसियन्ट ५० अंक रहेको थियो । अघिल्लो नेतृत्वको पालामा (१९८०–२००८) चीनको उपल्लो २०, ३० प्रतिशतले अधिकांश लाभ लिएको देखिन्छ । यद्यपि वर्तमान सरकारले थालेको संरचनागत सुधार, ग्रामीण कृषि योजना, न्यूनतम तलब वृद्धि र कर प्रणालीमा सुधारजस्ता कार्यक्रमले सन् २००८ बाट भने आय–असमानता घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
आर्थिक वृद्धि मात्र हेरेर नहुने रहेछ । त्यसको पुनर्वितरण कसरी भएको छ ? त्यस वृद्धिले धनी र गरिबको खाडल कम गरेको छ, छैन ? विपन्न समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराएको छ, छैन ? शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी र स्वामित्व छ, छैन ? प्रगतिशील कर प्रणाली लागू छ, छैन ? कर उन्मुक्ति पो छ कि ? जस्ता प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेछन् । ऐतिहासिक विश्लेषणको निचोड नै छ— असन्तोष र विद्रोह जन्मने एक प्रमुख कारण नै विपन्न र धनी वर्गबीचको खाडलमा हो ।
सीमित वर्गकहाँ अथाह पुँजी थुपि्रँदै जाने र तर अर्कोतिर श्रमजीवी वर्गको ठूलो हिस्सा बाँच्नकै लागि जीवनभर लडिरहनुपर्नेजस्तो खराब व्यवस्था कुनै छैन । अर्थशास्त्री ब्रान्को मिलानोभिजका लेखहरू पढेपछि असमानताको गुरुत्वबारे केही थाहा पाएँ ।
चिनियाँको जवाफबाट धेरै प्रभावित बनेछु । आजको दिनमा त्यो हरफ लेख्न परे, म चीनको आय असमानताबारे थप सोध्ने थिएँ । त्यो लेख निकै अधुरो लाग्छ ।
४. सरुभक्तहरू/दर्शनका अनुयायीहरू मात्रै भएकाहरूको देशको/सायद एक दार्शनिक हुन्
(सरुभक्तहरू, लामो कविता, पृष्ठ. ५७) ।
विसं २०५६ सालमा प्रकाशित ‘सरुभक्तहरू’, मेरो लामो कवितासंग्रह हो । मनमा उठेकै भरमा, कुनै सर्वेक्षणबिना नै, नेपालमा दर्शनका अनुयायीहरू मात्रै छन् भन्ने निष्कर्ष लेखेँ । त्यतिविधि निश्चित कसरी हुन सकेछु ? दर्शन मेरो प्रिय विषय हो । ओशो, यूजी कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति हुँदै अघि बढेको पठनमा पछिल्लो समयमा विविध विषयका दार्शनिक, चिन्तक र वैज्ञानिकहरू थपिएकै छन् । ओशोजस्ता रहस्यमयी द्रष्टा र बाबाहरूलाई छाडेको दुई दशक नाघेको छ । पछिल्लो समय स्टोइक दार्शनिक मार्कस एरिलिअस्, सेनेका, एपिकटिटसमा रुचि बढेको छ । कोरोनाकालमा एरिलिअस्को ‘मेडिटेसन्स्’, सेनेकाको ‘अन द सर्टनेस अफ लाइफ’ र एपिकटिटसको ‘डिस्कोर्स अफ एपिकटिटस’ र ‘इनकारिडियन’ पढेपछि चमत्कृत भएँ ।
मानव जातिको नैसर्गिक जिज्ञासा र ज्ञानप्रतिको भोक कुनै कालखण्डको मात्र रहेनछ । त्यो अनन्तदेखि बग्दै आएको नदीजस्तै रहेछ । जीव वैज्ञानिकहरू चार्ल्स डार्विन, रिचर्ड डकिन्स, एल्डो लिओपल्ड र एडवर्ड इ विलसन मेरा प्रिय लेखक भइगए । भौतिकशास्त्री रिचार्ड फेमेन, फ्रिमन डायसनका अन्तर्वार्ता सुन्दा म अवाक बन्छु । बहुविधात्मक ज्ञानप्रणालीमा (मल्टी डिसिप्लिनरी) विश्वास गर्ने चार्ली मंगरले जहिल्यै छक्क पार्छ । दार्शनिक शब्दले धेरै विशद (सीमित क्षेत्रमा तर गहिरो) आयाम समेटेको पाउँछु ।
‘सरुभक्तहरू’ सायद एक दार्शनिक हुन्, लेखेको थिएँ । शब्द चयन उपयुक्त भएन भन्ने लाग्छ । दार्शनिक शब्दको महत्त्व, २२ वर्ष अघि सोच्न सकेभन्दा, धेरै विशद पाउँछु । संग्रहमै लेखेको थिएँ, सरुभक्तहरू व्यक्तिभन्दा पनि संरचना हुन् । कुनै एक संवेग (यहाँ अहम्) लाई सर्वोच्च (प्राथमिक) मान्ने र सृजनात्मक लेखनमार्फत त्यसको सत्ता स्थापित गर्न उद्यत रहने संरचना (प्याटर्न) हुन् । सरुभक्तहरूलाई विचारक (अहम्केन्द्रित मानवतावाद अवधारणाको सापेक्षमा) भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
आजभोलि आफैंलाई प्रश्न गर्छु, दार्शनिक को हो ? को होइन ? भनेर मूल्याङ्न गर्ने तिम्रो क्षमता पुग्छ ? वैधानिकता के ? त्यो तहको दुस्साहसले आफ्नै मूढताको कथा भन्दैन ? नाजवाफ हुन्छु ।
विगततिर फर्केर हेर्दा माथि उल्लिखित चार प्रसंगले असहजभाव, अल्लारेपन र हाँसो उत्पन्न गराउँछ । तर, पश्चत्ताप छैन । बुझ्ने, सिक्ने क्रममा गरिएका कमी–कमजोरीमा (आफूले भेटेभरिको) हाँस्ने हो, ग्लानि अनुभव गर्ने होइन । विगतबाट धेरै प्रभावित हुने होइन, बरु त्यसलाई शिक्षक (मेन्टर) बनाउँदै भविष्ययात्रामा थप ऊर्जासाथ अघि बढ्ने हो । रिद्म देसाई सही भन्छन्- मान्छे मूलतः भविष्यउन्मुख (फरवार्ड लुकिङ) जीव हो ।
प्रकाशित : भाद्र २६, २०७७ १८:४९
सयौं वर्षसम्म घण्टी हल्लाउँदै हिँड्ने स्वच्छन्द खच्चडका कारभानहरू अब देखिँदैन । चरा नउड्ने आकाशझैं अब त कालीगण्डकी पनि रित्तो छ ।
श्रावण २३, २०७७ रोशन शेरचन
काठमाडौँ — वनविज्ञान रूखको विज्ञान होइन, बरु मानिसकै विज्ञान हो । रूखकेन्द्रित विज्ञान हो भने, त्यो हदसम्म, जबसम्म रूखले मान्छेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ । – ज्याक वेस्टोविज्, १९६७
लामपाते, चिलाउने र गोगनको घना जंगलमाझ रहेको वन–पाठशाला हेटौंडामा पढेको पनि चौंतीस वर्ष नाघेछ । सपना त मेरो पनि डाक्टर वा इन्जिनियर बन्ने थियो । तर, नाम निस्केन । अहिले सोच्दा सपना समयको हुँदो रहेछ । त्यसबखत समयले अधिकांशलाई डाक्टर वा इन्जिनियर बन्ने सपना भिराइदिएको थियो । विकल्पमा त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भर्ना भएँ तर अधिकांश कक्षा भने भिडियो देखाइने मखन र गुच्चा टोलमा लिएँ । एक वर्ष त्यसै खेर गयो । वन पाठशालामा भर्ना भएपछि भने जीवन मोडियो ।
गुरुबाट वनविज्ञान रूखहरूको भन्दा मान्छेकै विज्ञान हो भन्ने सुन्दा, त्यो मथिंगल खलबल्याउने कुरा थियो । सोसल फरेस्ट्रीले जरा हाल्दै गर्दाको समय थियो । त्यसैको जगमा नेपालमा सामुदायिक वन विकासको खाका कोरियो । गुरुकुलजस्तै थियो, वन पाठशाला । जंगलबीच । कडा अनुशासन । छात्रावासको जीवन । वन पाठशालका केही आधारभूत सिद्धान्त (फन्डामेन्टल्स्) अझै सम्झन्छु ।
पहिलो, वन नवीकरणीय स्रोत हो । बुट्यान, वनजंगल, घाँसेमैदान पारिस्थितिक प्रणाली भएकाले पटके प्रयोग गर्न सकिन्छ । वन वा घाँसेमैदान त्यसैले, भण्डार स्रोत (स्टक रिसोर्स) र प्रवाह स्रोत (फ्लो रिसोर्स) दुवै हो । ढुङ्गा, स्लेट, पेट्रोलियम पदार्थझैं पुनरुत्पादन हुन वनले लाखौं, करोडौं वर्ष लिँदैन । प्रजातिअनुसार, वनवृक्षहरू मुनाबाट (कपिसिङ्) पनि उत्तिकै पलाउँछ । भलै केहीका उर्बर मुना हुन्छन्, केहीका कमसल । टुँडिखेल पूर्वतिरको लहरेपीपलहरू माथि नै काट्दा पनि, मुना हालेर पलाएको हामीले देखेका छौं । पोलार्डिङ भनिने यी प्रक्रिया अन्य केही प्रजातिमा पनि पाइन्छ । बीउबाट हुने पुनरुत्पादन त चल्तीकै विधि भैहाल्यो ।
दोस्रो, यो प्रयोजनपरक विज्ञान (एप्लाइड साइन्स) हो । वनसँग सम्बन्धित ज्ञानलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने यसको ध्येय हुन्छ । कुन विज्ञान प्रयोजनपरक छैन ? प्रश्न गर्न सकिन्छ । तर, बहुसंख्यक जनसंख्या अझै कृषिमा निर्भर रहनु, पशुपालन कृषिको अभिन्न अंग हुनु र परम्परादेखि स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिहरू वनजंगलमै आश्रित रहनुले वनको प्रयोजन फराकिलो छ भन्ने बुझिन्छ । वन रूखहरूको झुन्ड मात्रै नभएर, नेपाली जीवनसंस्कृतिको अभिन्न अंग त्यसै भएको होइन । वनको समाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक ऐतिहासिकता हुन्छ ।
तेस्रो, वनहरूको पनि मान्छेको झैं घर (रेन्ज) हुन्छ । ती रेन्ज, धरातलीय स्वरूप, उचाइ, जलवायु, मोहडा, माटोलगायतका कारणले निर्धारण हुन्छन् । मुस्ताङको मान्छे संसारको हरेक देशमा भेटिन सक्छ तर तराईको खयर, सिसौ कञ्चनजंगाको घुन्सामा कसै गरी भेटिन्न ।
वन–पाठशाला रमाइलो थियो । त्यसका केही निश्चित विशेषता थिए । एक, अध्ययन भ्रमण । दोस्रो, बिहानको पीटी र साँझको खेलकुद । वनको आनीबानी चिनाउन प्रशस्त शैक्षिक भ्रमण हुन्थ्यो । हाल मार्केट गोष्ठी र सेमिनारको छ तर दिगो सिकाइका निम्ति भ्रमण जति प्रभावकारी अरू छैन । दामनको पहिलो भ्रमण धेरै सम्झन्छु— एउटै डाँडाको दक्षिणी मोहडामा छपक्क खोटेसल्ला, उत्तरी मोहडामा गोब्रेसल्ला, सदनमा सांसद बसेजस्तो कित्ताकाटै गरेर, अचम्म ! धरातलीय स्वरूप, जलवायु उही भएर पनि मोहडाको कारणले त्यसो भएको, बताइएको थियो । दक्षिणी मोहडामा घाम प्रशस्तै पर्ने, उत्तरमा नपर्ने ! त्यसैले कालान्तरमा खोटेसल्ला घाम रुचाउने प्रजातिमा (लाइट डिमान्डर) उद्भव हुँदै गयो, गोब्रेसल्ला सियाल सहने (सेड टलरेन्त) । वनवृक्षहरू यसै ठिङ्ग उभिएका बेरोजगार युवाजस्ता लाग्छन् । तर, हरेक वृक्ष त्यस पर्यावरणको सबभन्दा योग्य जैविक अभिव्यक्ति रहेछन् भन्ने थाहा भयो ।
दामनको जंगलमा रूखको नाप–जाँचबारे सिक्यौं– रूखको गोलाइ, उचाइ र आयतन निकाल्ने तरिका । भिरालोमा त्यो जटिल कार्य थियो । स्कुलमा ट्रिगनोमेट्रिमा पढेको ‘हाइट एन्ड डिस्टेन्स’ को व्यावहारिक प्रयोग बल्ल पत्तो पाएँ । समथरमा नाप–जाँच गर्न भने लगत्तै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा लगिएको थियो । विसं २०४२ को कुरो, चारकोसे झाडी निकै बाक्लो थियो । आधाभारस्थित निकुञ्जकै भौतिक संरचना अस्थायी प्रकृतिको थियो । वनभित्रै टेन्टमा हाम्रो बस्ने प्रबन्ध गरिएको थियो । निकुञ्जको कर्मचारीले केही दिनअघि मात्रै नजिकै जंगली हात्ती देखिएको बतायो । डरले हामी धेरैको निद्रा लागेन । टेन्टको पहिलो अनुभव थियो त्यो ।
त्यस्तै अर्को भ्रमणमा काँडेदार तारबार गर्न फेवा जलाधारको सिरान तारेभीर पुग्यौं । जयप्रसाद यादव सरले हामीलाई हौस्याउँदै उकालो चढाए । पोल र काँडेतार केही दिनअघि नै साइटमा झारिसकिएको थियो । त्यसपछि प्वाकल खन्ने, रोलबाट तार निकाल्ने र बोराको झुम्रोले तारलाई तन्काएर पोलमा युनेल ठोक्ने धन्दा सुरु भैहाल्यो । यादव सरले विद्यार्थीहरूलाई केही हुन्छ कि भनेर फस्ट एड किटमा औषधि, डेटोल र ब्यान्डेज पनि बोकेका थिए । लखतरान फर्केका थियौँ, बासस्थान पामे नर्सरीमा । चेकड्याम बनाउन धम्पुस–फेदी आसपास ढुंगाका चट्टान पनि बोक्यौं । अहिले पनि मुस्ताङ जाँदा त्यस स्थानमा आइपुग्दा त्यो स्मृति दोहोरिन्छ । चेनसले रूखहरू ढाल्ने अभ्यास गर्न सागरनाथको वनमा तँछाडमछाड गर्‍यौं । वन डढेलो नियन्त्रण अर्को अभ्यास थियो । ३४ वर्षपछि, कक्षाका लेक्चररहरू जति बल गरे पनि सम्झिइँदैन, शैक्षिक भ्रमणका अनुभव सम्झन केही गर्नै पर्दैन । अहिले त निजी वन क्याम्पसहरू आएका छन् । के सरकारी वा निजी वन क्याम्पसमा प्रयोगात्मक अभ्यासमा त्यति नै जोड दिइन्छ ? के वन संकाय मानविकीजस्तो त भएको छैन ? प्रश्न उब्जन्छ ।
वनक्षेत्र वृद्धिका कारण
वन अनुसन्धान तथा सर्भेक्षण विभागको ‘स्टेट अफ नेपाल्स फरेस्ट्स्’ (डिसेम्बर २०१५) अनुसार, वनले ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर भूभाग ओगटेको छ, जुन नेपालको कुल क्षेत्रफलको लगभग ४०.३६ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल वन क्षेत्रफलको ३७.८० प्रतिशत मध्यपहाडमा, ३२.२५ प्रतिशत उच्चपहाडी तथा उच्चहिमाली क्षेत्रमा, २३.०४ प्रतिशत चुरेमा र ६.९० प्रतिशत तराईमा अवस्थित छ । सन् १९७८/७९ को एलआरएमपी र सन् १९९४ को राष्ट्रिय वन सर्वेक्षणको तुलनामा वनक्षेत्र बढेको देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणले वनक्षेत्र नासिँदा, पुनर्वास कार्यक्रम र वन अतिक्रमणका बाबजुद वनक्षेत्र बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो । वन निकाय, स्थानीय समुदाय, उपभोक्ता समूह र संरक्षणमा काम गर्ने निकायहरूको सामूहिक प्रयासले यो सम्भव भएको हो । नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, बिरुवा संरक्षण, पुनरुत्पादन प्रणाली, वनगस्ती, वन अतिक्रमण हटाउने, वन डढेलो रोकथाम, उपभोक्ता समूह, निजी वनपालक वा साझेदारहरूलाई वन व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि, सचेतनामूलक अभियानलगायतका गतिविधि यसमा पर्छन् ।तर, थोरै गहिरिने हो भने, दुई बाह्य कारण यसमा जिम्मेवार छन् ।
पहिलो, वैकल्पिक ऊर्जाको बढ्दो प्रयोग । सडकको बढ्दो सञ्जालले दाउरालाई ठूलो हदमा एलपी ग्यासले विस्थापित गरेको छ । ग्यास दाउराभन्दा सस्तो छ । दाउरा खोज्न लाग्ने समय, दैनिक ज्यालादारीलाई दिने, ज्यालाले खाद्यान्नको जोहो गर्ने र ग्यास किन्ने घरधुरी बढेको छ । भलै सडक सञ्जालले नछोएका उच्च हिमाली क्षेत्र, चुरे र महाभारत शृंखलाका कुनाकाप्चामा ग्यास पुग्न बाँकी छ । तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रमा बायोग्यास र बिजुलीकै प्रयोगकर्ता पनि बढेका छन् । तर, विगतमा त्यस्तो थिएन । म गृहजिल्ला मुस्ताङ सम्झन्छु ।
टुक्चेभन्दा उत्तरका मार्फा, जोमसोम, कागवेनी, रानीपौवा, मुक्तिनाथमा दाउराको ठूलो दुःख थियो । अझै छ । कारण जंगल कोसौं टाढा छ । बन्जर भूमि र काँडेदार बुट्यानहरूको बाहुल्य छ । चर्को अभाव भएकाले मार्फा, जोमसोममा दाउरा भण्डारण गर्ने चलन थियो । चलन लामो समय बाँचे परम्परा बन्ने रहेछ । हरेकको छतमा गच्छेअनुसारको मुढा वा दाउराको चाङ देखिन्थ्यो । कतिका चिरुवा त बाउ–बाजेकै पालाकाजस्ता लाग्थे– काला, निख्खुर ढाडे, समयको लेउ लागेका । दाउराका चाङ हेरेरै को कति धनी छ थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने गाइँगुइँ पनि चल्थ्यो । खच्चड वा झोप्पामा बोकाएर टाढाको जंगलबाट काठ ओसार्न जो–कोहिले सक्दैनथे । तर, बाटो खुलेपछि चाङ लगाउने परम्परामाथि गाडी गुडेको छ । घर–घरमा ग्यास भित्रिएको छ । खच्चड, झोप्पा बेरोजगार भई बसाइं सरेका छन् । सयौं वर्षसम्म घण्टी हल्लाउँदै हिँड्ने स्वच्छन्द खच्चडका कारभानहरू अब देखिँदैन । चरा नउड्ने आकाशझैं अब त कालीगण्डकी पनि रित्तो छ ।
दोस्रो, रोजगारका निम्ति प्रबासिने कारणले गाउँ रित्तो हुँदै जाँदा खेतबारी बाँझो हुनु र त्यो स्थान क्रमशः जंगलमा बदलिनु । वन विज्ञानमा यौटा सिद्धान्त छ ः इकलजिकल सक्सेसन । त्यसमा बताइन्छ, समयक्रममा प्रकृतिमा वनस्पतिहरू कसरी आउँछन् र बदलिन्छन् ! प्रकृतिलाई (यहाँ भूमि भनौँ) त्यसै छाडिदिए, पहिला पायनियर वनस्पतिहरू आउँछन्, त्यसले माइक्रो क्लाइमेट निर्माण गर्छ, माटोको गुण परिवर्तन गर्छ र दोस्रो तहको वनस्पतिका निम्त उपयुक्त वातावरण बनाउँछ । समयको अन्तरालमा, दोस्रो तहको वनस्पतिलाई पनि विस्थापित गर्दै अन्त्यमा क्लाइमेक्स वृक्षहरू देखापर्छन् । तत्तत् प्राकृतिक वातावरणमा त्यो अन्तिम र स्थिर तहको वृक्ष हुन् । यो विकासक्रम पारिस्थितिक प्रणालीअनुसार भिन्न हुन्छ । जस्तै, तराई–मधेसको खोला किनारको वनमा (रिभराइन फरेस्ट) प्रारम्भमा कांस, झौवा आउँछ । बिस्तारै लामो समय लिँदै त्यसलाई सिन्दुरे, खयर, सिसौर अन्त्यमा सिमल र सालले विस्थापित गर्छ ।
वनको बहुउपयोग र व्यवस्थापन चुनौती
वैकल्पिक ऊर्जाको बढ्दो प्रयोग, सडक सञ्जालमा वृद्धि, तीव्र सहरीकरण, मानव–वन्यजन्तुको द्वन्द्व र वैदेशिक रोजगार आदि कारणले पछिल्लो समयमा वनको प्रयोगमा परिवर्तन देखिएको छ । वनप्रतिको प्रत्यक्ष निर्भरता घट्दो छ । घाँस, दाउरा, स्याउला, पतकर, जडीबुटी र फर्निचरका निम्ति काठ निकाल्ने अलावा वन पैदावार ननिकालेरै प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । वनपैदावार ननिकालीकन गरिने प्रयोग (ननकन्जम्टिभ युस) निकुञ्ज, सामुदायिक वन, पर्यापर्यटन, सिमसार, कार्बन व्यापार र सहरी वनमा विशेष देख्न सकिन्छ । रूख नकाटीकन, नमासीकन, सौन्दर्यको महत्त्व (एमेनिटी भ्यालु) लिने बढ्दै छन् । त्यस्तै जैविक विविधता मूलतः संरक्षित क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्रमा (अघिको संरक्षण वन) केन्द्रित छ । काठमाडौंको एक मात्र सहरी वन रानीबारी सामुदायिक वन हो । प्रातःकालमा योगा गर्ने, ध्यान गर्ने, मर्निङ वाकमा यो वन लोकप्रिय छ । बढ्दो जनघनत्व, ध्वनि तथा वायु प्रदूषण र खुला स्थानको अभावले गाँज्दै गरेको सहरी क्षेत्रमा वनको वेलनेस भ्यालु महत्त्वपूर्ण बन्दै छ ।
वन क्षेत्रको एक मुख्य चुनौती, राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको न्यून योगदान हो । एफएओको रेपोर्टअनुसार, १९९०–२००० मा वनको योगदान वार्षिक ४.४ प्रतिशत रह्यो । त्यस्तै सन् २००८ मा प्रकाशित वन अनुसान्धान तथा सर्वेक्षण विभागको तथ्याङ्कमा, ९.२३ प्रतिशत देखिन्छ ।
वन नवीकरणीय स्रोत भएकाले उचित व्यवस्थापन भए, काट्दैमा त्यो मासिँदैन । बरु कुन उद्देश्यका निम्ति त्यो काटिँदै छ त्यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ । वनको प्रतक्ष्य फाइदा लिन सरोकारवालाबप्च मिहिन छलफल आवश्यक छ । देशभित्रै काठको अत्यधिक माग हुँदाहुँदै व्यवस्थापनको कमजोरीले विदेशबाट काठ आयात गर्नुपरेको विसंगत स्थिति छ । वन अर्थशास्त्री डा. राजेश राई र विशाल भारद्वाजको अध्ययनअनुसार, नेपालका उत्पादनशील वन क्षेत्रले वार्षिक रूपमा कम्तीमा ३५ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । तर, आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल क्षमताको पाँच प्रतिशत अर्थात् एक करोड ७५ लाख घनफिट काठ मात्र उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २.१३ अर्बको आयात चार वर्षभित्र तीन गुणाले बढेर साढे ६ अर्ब पुग्यो । स्वदेशी काठको माग धान्न र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थप टेवा दिन सरकारी वन, साझेदारी वन र चुनिएका सामुदायिक वनमा काठ उत्पादनका निम्ति सघन वन व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । साथै तराई–मधेसको वनमा ठूलो परिमाणमा रूखहरू कुहिएर, धोद्रो भएर बसेको छ । विशाल परिमाणका यी रूखको स्थान प्राकृतिक पुनरुत्पादन वा वृक्षरोपणबाट भरिलो बनाउन आवश्यक छ । ती वनक्षेत्र जैविक मार्ग हो भने फेरि त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
माग र आपूर्तिबीचको दूरी कम गर्न नसक्नुका पछाडि सायद प्राविधिकभन्दा राजनीतिक कारण बढी छ । वनक्षेत्रमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव खट्किँदो छ । वन विज्ञानमा लामो अवधिको सोच आवश्यक पर्छ । नेतृत्व तहमा त्यसअनुसारको योजना र धैर्य न्यून देखिन्छ । नेतृत्व तहमा मात्रै होइन, अधिकांश वन प्राविधिकहरू पनि वार्षिक क्यालेन्डरको अल्पकालीन दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुँदै गएजस्तो लाग्छ ।
टिम्बरको बढी उत्पादन गर्नु, माग र आपूर्तिको दूरी कम गर्नु, बाहिरिने पैसा जोगाउनु, वनमा आधारित रोजगार सृजना गर्नु र राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थप टेवा दिनु प्रमुख उद्देश्य भए पनि वनको प्रत्यक्ष योगदान मात्र हेर्नु एकांगी हुन्छ । वनका अप्रत्यक्ष फाइदाहरू अनेकन छन् । यद्यपि अप्रत्यक्ष फाइदाको मापन गर्नु कठिन छ । सन् १९९५ मा जैविक विविधता प्रोफाइल परियोजनाका अनुसार, देशभर सूचीकृत ११८ इकोसिस्टममध्ये ११२ वटा वन इकोसिस्टम छन् । यी इकोसिस्टमले दिने वातावणीय सेवाको समग्र मूल्याङ्कन हुन बाँकी छ । केही प्रयास नभएका होइनन् । सन् २००५ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको वातावरणीय सेवाको आर्थिक मूल्याङ्कन एक हो । सन् २००८ मा वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान निकाल्न अध्ययन गरेको थियो, जसमा प्रतक्ष्य (युस भ्यालु) र अप्रतक्ष्य (नन युस भ्यालु) महत्त्व दुवै समेटिएको थियो । तर, यस विधिलाई परिमार्जित गर्दै थप विज्ञानसम्मत (रोबस्ट) बनाउन सकिएको छैन । न यो सघन छलफलकै विषय बनेको छ ।
सन् २०१३ मा भारतमा अर्थशास्त्री पार्था दास गुप्ताको नेतृत्वमा हरित राष्ट्रिय लेखापालन (ग्रिन नेसनल एकाउन्ट्स) विशद् पद्धति विकसित गरिएको थियो । वातावरणीय सेवा सुविधाको समग्र लेखाजोखा नभएसम्म वनको समष्टिगत योगदान यकिन गर्न असम्भव छ । पर्यटनमा मात्र वनको योगदान यकिन गर्न सकिए, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वनक्षेत्रको योगदान थपिने थियो । कारण पर्यापर्यटन र साहसिक पर्यटन मूलतः प्रकृतिमै केन्द्रित छ । न्यून योगदानलाई देखाएरै अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट नपारेको वनकर्मीबीच बारम्बार चर्चा चलिरहन्छ ।
वन विभागको २०१७–१८ को तथ्याङ्कअनुसार, करिब २२ लाख ३७ हजार हेक्टर सामुदायिक वनले ओगटेका छन् । सामुदायिक वनको संख्या २२,२६६ छ । प्रत्येक पालिकालाई सरदर ३,००० हेक्टर वन पर्न आउँछ । वनको क्षेत्रफल बढाउन, उपभोक्तालाई वन पैदावारमा पहुँच पुर्‍याउन, महिला र विपन्न वर्गको सशक्तिकरणका निम्ति सामुदायिक वन सफल छ । द्वन्द्वकालमा अन्य स्थानीय संस्था निष्क्रियप्रायः रहँदा, पिँधसम्म फिँजिएकाले, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू निर्बाध चलिरह्यो । तर, यसका कमजोरी पनि छन् । कतिपय सन्दर्भमा पारदर्शिता र सुशासन कर्मकाण्डजस्ता भएका छन् । उपभोक्ताप्रति उत्तरदायित्व भावनाको कमीले व्यक्तिगत आर्थिक फाइदा लिने काममा लागेका कैयन् उदाहरण छन् । वनविज्ञानको प्राविधिक पाटाहरू नसिक्ने, लागू नगर्ने (वा नाम मात्रको गर्ने) र स्रोतको तथ्याङ्कबारे जानकारी नराख्ने समूह बग्रेल्ती छन् ।
अर्को चुनौती, क्षेत्र अवधारणा (जोनिङ एप्रोच) लागू गर्नु हो । यो अवधारणा लागू नभएको होइन तर जोड पुगेको छैन । न त यसमा पर्याप्त छलफल नै भएको छ ।
गत ८ जनवरीमा वन अध्ययनकै सिलसिलामा विजयराज पौडेलसँग धनुषाधाम पुगेका थियौं । ३६० हेक्टरको संरक्षण वन हेरिसकेपछि स्थानीय समितिसँग छलफल गर्‍यौं । वनलाई बहुउपयोग गरिएको रहेछ– जैविक विविधता, सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन, वनस्पति उद्यान र वन्यजन्तु उद्यान । वन्यजन्तु उद्यानको किस्सा रोचक लाग्यो । विगतमा किङ कोब्राबाट राम्रो आम्दानी भएको रहेछ । प्रवेश–शुल्क रु. १०/– जनकपुरबाट समेत मानिसहरू वन हेर्न आउँदा रहेछन् । धनुषा मन्दिर नजिकै भएकाले मिथिला परिक्रमा, राम–जानकी विवाह र माघ महिनामा भक्तजनहरूको पनि उत्तिकै घुइँचो । किङ कोब्रा मरेपछि भने आम्दानी ह्वात्तै घटेको वन अधिकृत शंकर झाले सुनाएका थिए । अहिले वनमा अजिंगर छ । तर, अजिंगरले पहिलेझैं वनमा मान्छे तानेको छैन । दुर्लभ वन्यजन्तुप्रति मान्छेको आकर्षण जहिल्यै सदावहार छ । सदर चिडियाखानामा पनि वनमान्छे राखिएको खण्डमा मान्छेको सधैँ भीड लाग्छ । वनबाट अधिकतम लाभ लिन हामीलाई धेरै धनुषाधामहरू चाहिएको छ ।
सामुदायिक वन, साझेदारी वन, मध्यवर्त्ती सामुदायिक वन र वन संरक्षण क्षेत्रमा व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरू बनाइन्छ । वन व्यवस्थापन पद्धतिमा वनको बहुप्रयोगमा जान आवश्यक भैसकेको छ । वनक्षेत्रको बहुउपयोग गर्न यो अवधारणा नभई सम्भव छैन । उदाहरणका रूपमा, चुरेअन्तर्गतको सामुदायिक वनमा सिमसार छ भने, मनोरञ्जनका निम्ति नौका विहार, पदमार्ग र पिकनिक स्पट बनाई पर्यापर्यटन विकास गर्न सकिन्छ । दुर्लभ पन्छीको बासस्थान हो भने संरक्षण नै गर्नुपर्छ । त्यही वनको अर्को खण्डको जैविक विविधता र पर्यटकीय महत्त्व छैन भने टिम्बर उत्पादनलाई जोड दिन सकिन्छ । यसरी एउटै वनक्षेत्रलाई वातावरणीय सेवाको आधारमा खण्ड छुट्टयाएर बहुउपयोग गर्दा अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ ।
वन र समृद्धि
वनक्षेत्रको ठूलो चुनौती देशकै समृद्धिसँग सम्बन्धित छ । कारण ठूला विकास वा पूर्वाधार निर्माण वनक्षेत्रमै भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हाइड्रोपावर, ट्रान्समिसन लाइन र सडक राजमार्ग आवश्यकता र अवसर जति हो, वनक्षेत्रका निम्ति उतिकै चुनौती हो । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि, २०७६’ अनुसार, सम्बन्धित मन्त्रालयले योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय वनक्षेत्र नपर्ने गरी सम्भाव्यता र विकल्पहरूको अध्ययन गर्नुपर्नेछ, लेखिए तापनि यथार्थ विपरीत छ । प्रदेश राजधानी वनमै राख्ने योजना बन्छ । भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको पुनर्वास वनमै गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निम्ति वनक्षेत्र नै छानिन्छ । प्रसारण लाइन वनक्षेत्रबाटै तानिन्छ । रूख बोल्दैन, त्यसैले धमाधम काटिँदै छ । लाग्छ, मान्छेले वनलाई जहिल्यै प्रतिवादी बनाएको छ । त्यति मात्र होइन, सरकारी कार्यालय भवन निर्माण, सुरक्षा निकायका निम्ति जग्गा तथा आवास, सञ्चार पूर्वाधारका निम्ति पनि वनक्षेत्र प्रयोग भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पछिल्ला वर्षमा ग्रामीण सडकको नाममा पर्यावरणीय क्षति चुलिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन नगरी अन्धाधुन्ध खनिएका बाटाहरू, डोजरको चरम प्रयोग, त्यसले निम्त्याउने पहिरो, पानीको मुहान सुक्ने र नदीको बहाव परिवर्तनजस्ता अत्यन्त दुःखद घटना भएका छन् ।
पूर्वाधार निर्माणलाई आवश्यक ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र ओसारपसार व्यवस्थित गर्न नसक्दा जलाधार क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) नगरी पूर्वाधारको काम थालिनु चिन्ताको विषय छ । दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरामा नेतृत्व चुकेको छ । वन र वातावरण सेक्टर सायदै यति निरीह यसअघि भएको थियो । प्राविधिक ज्ञान र अनुभव (जे जति छ) वन निकायमा छ, पूर्वाधार विकासको अथाह बजेट र कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकारमा । अपवाद छाडी समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी छैन ।
भर्खर पंक्तिकारले केही गाउँपालिकाको वातावरणसम्बन्धी खर्चको विश्लेषण गरेको थियो । प्रारम्भिक विश्लेषणमा, पालिकाहरूको वातावरणसम्बन्धी सरदर व्यय ३ प्रतिशत छ । अधिकांश खर्च बाटो, भवन र खानेपानीमा देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री नबनाउने कसैले भन्दैन तर ठोस काम अत्यन्त कम भएको छ ।
समयमै मान्छे नचेत्ने हो भने, त्रासद समय झन् नजिकिनेछ । देशले भर्खर भोगेको बाढी–पहिरो र डुबानले वस्तुतः मान्छेकै स्वार्थको कथा भन्छ । हजारौं डोजरले चिथोरेका पर्यावरण, मृत्युशय्यामा अन्तिम सास लिइरहेका खोलाहरू र मिचाहा झारले गाँज्दै लगेको घाँसे मैदानले दुःखकै गीत गाइरहेका छन् । ‘जंगल : एउटा सलिलक्की’ मा कविले त्यो गीत उहिल्यै सुनेका थिए–
विषादमा डुब्नेछ जून
खोला र जंगलसित लुकामारी बिलाउँदा
रूखहरूसँग निर्धक्क निदाउन नपाउँदा
लहडी घामले सूर्यको प्रशंसामा
युगौदेंखि गाउँदै आएको गीत
एक दिन अलप हुनेछ
– अविनाश श्रेष्ठ
प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ १९:५९